musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Pfuti Dzakaburitswa: Pentagon Kuvaka Pane Kukiya
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
PFPA yakati chivakwa chePentagon muArlington, Virginia - dzimbahwe reUnited States Dhipatimendi reDziviriro - chakange chakakombama nekuda kwe "chiitiko" pachiteshi chechitima chemuzinda.
Pentagon iri munzvimbo yekukiya nekuda kwe "chiitiko."
Maererano nemishumo, vanhu vakati wandei vakakuvara mushure mekuridzwa kwepfuti.
Arlington Moto uye Emergency Medical Service vakasimbisa kuti ivo vari kupindura kune "chiitiko chemhirizhonga."
Pentagon Force Protection Agency (PFPA) yakazivisa kuti chivakwa chePentagon chakatovharika, mushure mekupfurwa kwepfuti uye vanhu vakakuvara, zvichikurudzira veruzhinji kuti vagare kure nenzvimbo iyi.
MuChipiri mangwanani tweet, iyo PFPA yakati iyo Pentagon chivakwa muArlington, Virginia - dzimbahwe reUnited States Dhipatimendi reDziviriro - yaive mumamiriro ekuvhara nekuda kwe "chiitiko" pachiteshi chechitima chemuzinda, pasina kupa rumwe ruzivo .
Pentagon Force Protection Agency zvakare yakatumira yambiro yekuraira vese vashandi kuti vagare muchivako ichi.
Sekureva kwemamwe marezenisi emunharaunda asina kusimbiswa, vanhu vakati wandei, kusanganisira mupurisa, vakakuvara mushure mekuridzwa kwepfuti. Mumwe mukuru, uyo akataura asina kuda kudomwa zita, ati munhu mumwe chete anga ari pasi, kunyangwe hazvo hutano hwavo hwaisazivikanwa.
Arlington Moto uye Emergency Medical Service yakasimbisa paTwitter kuti ivo vaipindura "chiitiko chemhirizhonga." Mune yakatevera tweet, vakasimbisa kuti vakasangana nevarwere vakawanda uye kuti "chiitiko ichi chichiri kushanda."
Vhidhiyo yakagovaniswa pasocial media yakaratidza kuratidza CPR ichiendeswa kune vangangoita vanhu vaviri. Hazvina kujeka kana paine munhu anofungidzirwa akabatwa, kana kuti vanhu vangani vakavhura pfuti.
Chiziviso paPentagon pachacho chakati kukiya kwakakonzerwa ne "chiitiko chemapurisa." Zvitima zvepasi pevhu zvakarairwa kuti zvipfuure chiteshi kuitira kuti mashandiro emapurisa aenderere mberi asingavhiringidzwe.